Nagu saabsan - Foshan Shunde Ruima Makiinado Co., Ltd.
Foshan Shunde Ruima Makiinado Co., Ltd.
Ruima Makiinado Co., Ltd. Waxaa la aasaasay 2000, waxay leedahay in ka badan 300 oo shaqaale ah, oo ay ku jiraan 50 farsamo yaqaanno R & D, 10 maamuleyaal, 40 shaqaale iib ah iyo 20 adeegga iibka kadib. Aagga warshadda cusub ee 35000 mitir murabac ah ayaa socda, Ruima waa mashiinno alwaax ka shaqeeya waxayna aragtay shirkad isku dhafan cilmi baarista iyo horumarinta, qaabeynta, wax soo saarka iyo iibinta.
Sida laga soo xigtay xaaladda wax soo saarka iyo dhirta ee macaamiisha gudaha iyo kuwa ajnabiga ah, waxaan bixinnaa xalal wax soo saar oo goynta goynta, qoryaha laba jibbaaran, geesaha oo la nadiifiyo, diirka geeskiisa iyo wixii la mid ah. Sidoo kale u siinta macaamiisha guud ahaan qalabka guryaha loo habeeyo iyo qaabeynta qalabka iyo adeegsiga xalka, xarunteeduna tahay Magaalada Lunjiao, Degmada Shunde, Foshan City International Woodworking Makiinado City oo ah Carwada ugu Weyn ee Mashiinka Alwaaxda ee Shiinaha.
Ka dib in ka badan 20 sano oo raasamaal ah, shirkaddu waxay u soo baxday waxqabad dhinaca warshadaha ah oo ah nooca saxanka, alwaax adag iyo alwaax alwaaxa laga soo buuxiyo, waxayna si dhow ula shaqaysay shirkado caan ah oo caan ah. Waxyaabaha ay soo saarto waxaa ka mid ah: garbaha miisaska lagu gooyo, mindiyo goynta, mindiyo xardha, mindiyo muquun ah, garbaha yaryar, miinshaaro kooxeedyo, miinshaaro, iwm. Aasiya, Ilaa hadda, waxaan ku leenahay dalka 159 wakiilo, wax soo saarkeenu waa u dhoofinta Ameerika, Afrika iyo dalal kale.
Sanadihii la soo dhaafay, waxaan si guul leh u soo saarnay aaladaha miinshaar dheemman, kuwaas oo aan ku tiirsanayn soo dejinta shisheeyaha, oo macaamiisha siiya hareeraha miinshaarrada iyo qalabka waxqabadka super kharashka, adkaanta sare, iska caabbinta badan iyo nolosha muddada dheer.
Tan iyo markii la aasaasay, Ruima Makiinado u hoggaansan "hal-xirashada hal-abuurka, samaynta Ruima" ujeeddada, oo ku saleysan tayada wax soo saarka, adeegga iimaanka wanaagsan ee shirkadda, u dhuuqo tikniyoolajiyadda wax soo saarka adduunka, si joogto ah u hagaajiso habka wax soo saarka, hagaajinta habka iyo habka adeegga, wuxuu awood u yeelan doonaa inuu kaa caawiyo shirkaddaadu inay hawada ka baxdo!
Qalabka Mashiinka Cnc, Qaybaha Cnc, Golaha Wasiirada Qalabka Alwaaxa, Qaybaha router-ka CNC, Qalabka Robin Wood, Qorshayaasha Golaha Wasiiradda Qalabka Shaqaynta,